Ikhadi elisha le-DekTec's Quad 3G-SDI / ASI PCIe lingakhuthaza ukukhiqizwa kwevidiyo nokusatshalaliswa kwabasakazi | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Okufakiwe » I-DekTec's New Quad 3G-SDI / ASI PCIe Card kaDekTec ingakhulisa ukukhiqizwa kwevidiyo nokusatshalaliswa kwabasakazi
Ividiyo inikeze ukudala okuqukethwe okusha okusha, futhi inqubo yokusatshalaliswa yenza kuphela isenzo sokwakha ababukeli sithokozise ngokwengeziwe ngabathuthukisi bokudala. Izazi embonini yezokusakaza zihlala zifuna izindlela ezintsha zokwakha okuqukethwe okungcono futhi zikwenze ukutholakala kubalaleli bazo njengoba ziqhubeka nokukhula. Uma bekubakhona indlela yokuthi abasakazi basebenze ngcono amakhono abo wokwenza ividiyo, khona-ke I-DecTek inesixazululo, futhi lokho kunakho okusha Ikhadi le-Quad 3G-SDI / ASI PCIe, lo I-DTA-2174B.
Kusukela ku-2004, I-DekTec uhlinzeke ochwepheshe be-TV ye-digital ngezinto ezintsha ze-software nezingxenye zesoftware ezisuselwa kuma-PC ajwayelekile asebenzayo. Inkampani inikezela ngamadivayisi we-PCI-E, i-USB-2, i-USB-3 kanye nama-standalone ukuze axegise amakhompiyutha ezindaweni ezihlanganisiwe zamavidiyo wesikhungo sevidiyo esisakazwayo, indawo yokuhlolwa, noma yokuhlanganiswa kwe-OEM. Ama-DekTec amakhasimende angasebenzisa izindleko eziphansi, ezisebenza kahle zanamuhla ze-CPU ukuze kuthuthukiswe izixazululo ezingabizi kakhulu, nezintsha. Lokhu kwenziwa ngokusebenzisa i-Digital Video I / O yabo namabhodi wokucubungula.
Eziningana Ama-DekTec imikhiqizo isekela i-ASI, i-TSoIP, i-RF, i-SDI, kanye ne-UHD I / O, futhi banikeza ama-modulators wokuhlola kanye nama-demodulators wezindinganiso eziningi. Eziningana zalezo zindinganiso ezisekelwayo zibandakanya
Noma yimuphi umakhi wemishini yokusakaza esekwe kwi-PC angahlanganisa Ama-DekTec Amakhadi we-PCIe njengama-adaptha esistimu ohlelweni lwawo. Le nqubo ibizwa nge- "OEM" lapho kusebenza amanani akhethekile we-Hardware. Amadivayisi amaningi enkampani ye-USB atholakala ngaphandle kwecala njengemishini ye-OEM, nayo. Ngokuhlanganisa i-Hardware yabo nohlelo lokusebenza lomsebenzisi, I-DekTeck inikeza i-SDK yamahhala ye-Linux ne-Windows, ezivamile kuwo wonke ama-hardware abo.
Ngaphezu kokuba nentengo ekhangayo yonjiniyela, i-DekTec's I-DTA-2174B Ikhadi lisebenza njengemphumelelo emangazayo nekhadi laso elaziwa nge-3G-SDI. Le divayisi ine-latency ephansi nokusekelwa okungu-12G-SDI ethekwini 1, elenza likhange ngokwengeziwe ngabathuthukisi bokukhiqiza ividiyo nemishini yokuhambisa ukwedlula eyandulelayo. Zonke I-DTA-2174B's amachweba asekela i-DVB-ASI, futhi lokho kuvumela izinhlelo ezixubekile / ezingafakwanga amandla njengokufaka kwe-4K kokufaka kwe-12G-SDI nokuphuma kwe-ASI, noma i-4K decoder ene-ASI okokufaka nokukhipha i-12G-SDI.
Idivayisi eyodwa esebenza eceleni kwe I-DTA-2174B Ikhadi lelo le-DekTec Matrix API® I-2.0, evumela umsebenzisi ukuthi adale izinhlelo zokwenza ngokwezifiso ze I-DTA-2174B. Izici ezimbalwa zeMatrix-API zifaka:
Faka ngqo noma ukhiphe amasampula omsindo / wevidiyo noma idatha ye-ANC
Ukuguqulwa kwefomethi yePixel
The I-DTA-2174B's i-firmware ifaka amachweba amane azimele, futhi ngayinye inokulungiswa ukusebenza njenge-ASI noma i-SD /HD/ 3G-SDI okokufaka noma okukhipha. Imbobo ngayinye nayo ingasebenza njengekhophi eline-buffered elinye elinye itheku ukwenza amakhophi amaningi wesiginali efanayo yokuphuma. Amachweba amisiwe njengokukhishwa angavumelaniswa echwebeni lokufaka le-bi- / tri-level genlock.
Ama-DekTec I-DTA-2174B uyilungu lesibili lohla lwenkampani entsha ye-adaptha ye-SDI / ASI ye-PCIe, futhi la makhadi ahlinzeka ngezinombolo ezahlukahlukene zamachweba wokuthenga imali, ngamanani wohlu ancintisanayo kakhulu.
Ngamanani angcono nolwazi oluthe xaxa mayelana I-DTA-2174B ikhadi, vakashela www.dektec.com/news/2020/#Feb20.
Kungani Abasakazi Kufanele Bakhethe i-DekTec
Eminyakeni eyishumi nesithupha kulandela ukusungulwa kwayo, iDekTec inephayona ku-ATSC 3.0. Ngaleso sikhathi sinikeze ama-modulators wokuhlola nabamukelayo, kanye nokunikeza abathuthukisi ngesoftware yemishini yokuhlola ehlukahlukene ebandakanya i-StreamXpert ye-MPEG-2 TS, real-time noma ukuhlaziya okungekho ku-inthanethi, i-SdEye ye-SDI engahloliwe ne-UHD (4K) ngokuqapha kwe-HDR.
I-DekTec isekela i-HEVC, H.264, ukuhlaziywa kwe-AC-4, nokuningi. Inikeza nemikhiqizo kumakhasimende wokugcina, abathengisi, abahlanganisi, noma i-OEM ngokufakwa ku-Broadcast, Cable, Isathelayithi, I-IPTV, I-Digital Signage, isicelo seMedical, ezempi, ezokuphepha Homeland, inkampani inikezela ngezixazululo ezahlukahlukene zokuhlola nezilinganiso ze-headend noma izinhlelo zokusebenza zokuqapha ezikude.
Ngeminye imininingwane ngeDekTec, vakashela www.dektec.com/.
imboni yokusakaza ochwepheshe bezokusakaza Ukudalwa kokuqukethwe I-DecTek ukusatshalaliswa I-DTA-2174B Ikhadi le-Quad 3G-SDI / ASI PCIe 2020-05-24
Ngaphambilini: IDraco vario Ultra HDMI 2.0 Yakha Ukusatshalaliswa Kwevidiyo Ekhwalithi ephezulu
Olandelayo: Umhleli Omkhulu / Umdwebi Wokuqopha Imidwebo Ophezulu